Geedi socodka, muuqaal ahaan, sida loo sameeyo dahab AirPods ah oo ay sameeyeen dahable xirfadle ah | Wararka IPhone
AirPods, ficil ahaan tan iyo markii la bilaabay, waxay noqdeen a shay ka mid ah dadka isticmaala badan, marka lagu daro noqoshada qaab lagu wargaliyo kuwa hareerahayaga ah oo aan dooneynin in khalkhal la geliyo. Bishii Maarso ee sanadkan, Apple waxay soo saartay jiilkii labaad ee AirPods, oo ah cibaaro ugu weyn oo ay ka mid yihiin kiiska lacag la'aanta ah iyo qalabka H1.
Dahabku waligiis wuu ahaan jiray la xidhiidha qayb ka mid ah qalabka elektarooniga ah ee qaaliga ah, qaar badanna waa kuwa ugu taajirsan isticmaalayaasha, ee haysta fursada, doorta daboolida ama moodooyinka gaarka ah ee lagu sameeyo dhagaxyo qaali ah ama biro. Maanta waxaan ku tusineynaa fiidiyoow halkaas oo khabiir dahable ahi u beddelo AirPods-kiisa AirGolds.
Nidaamka loo sameynayo 18-karat oo dahab ah AirPods ayaa lagu muujiyay fiidiyaha kore. Marka hore, Pablo, dahablaha sameeya howshan, kala furfuro habka gudaha ee AirPods, marka hore daboolka kore ee sameecadaha iyo marka labaad qaybta hoose ee ay ku yaalliin teknolojiyadda lacag-bixinta iyo batteriga.
Kadib abuur caaryo, caaryada mar dambe lagu buuxin doono 18-karat oo dahab ah si loo helo qaybaha dahabka ah ee qaybaha gudaha lagu dari doono. Sida aan aragno, howshu waa mid aad u shaqeyneysa laakiin dhowr geeddi-socod oo nadiifin iyo ciideyn ah ka dib, AirPods ka samaysan dahab 18-karat ah ayaa laga helaa, ugu yaraan banaanka.
Marka hawshu dhammaato, Pablo wuxuu ina tusayaa sida AirPod-yada cusub oo wata 18-karat oo dahabi ah oo bannaanka ah waxay u shaqeeyaan si qumman, inkasta oo ay ku sameyso taleefanka casriga ah ee Android. Pablo Cimadevilla, oo jidka ku hayaa Isbaanish, ma aha oo kaliya dahable, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay kanaal YouTube ah halkaas oo uu ina tuso shaqooyin badan oo uu ka qabto dahabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Habka, fiidiyowga, sida loo sameeyo dahab AirPods oo ay fuliso dahable xirfadle ah